နေအိမ် / Archives for Albania Arbitration
BURIMI SRL AND Eagle ဂိမ်းများ SH.A V ကို. အယ်လ်ဘေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံ (ICSID ပြဿနာ NO. ARB / 11/18) ဆုချီးမြှင့် - 28 မေ 2013
28/05/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဤသည်နေမကောင်း-fated မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအီတလီနှင့်အယ်လ်ဘေးနီးယားအကြားနိဂုံးချုပ်များအတွက်သဘောတူညီချက်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည် ("BIT"), အယ်လ်ဘေးနီးယားရဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ("၌") နှင့် ICSID ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ. တွင် 2004, လင်းယုန်အားကစားပြိုင်ပွဲ, တစ်ထီလက်မှတ်တွေကုမ္ပဏီ, အယ်လ်ဘေးနီးယားရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေလောင်းကစားဝိုင်းပါမစ်လျှောက်ထားနှင့်တစ်ဦးကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည် […]
အောက်မှာ Filed: အယ်လ်ဘေးနီးယားအနုညာတစီရင်, အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်, ICSID အနုညာတစီရင်
Aceris ဥပဒေ SARL ရဲ့ထူးထူးအထွေထွေရှိငြား Clients
03/09/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
Aceris ဥပဒေ SARL ဖောက်သည်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအစုံက၎င်း၏ရှေ့နေများကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်’ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သူတို့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု, သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံနဲ့ Aceris’ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအပေါ်မိုးသည်းထန်စွာမှီခို. Aceris သာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများများအတွက်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှုကိုထောက်ပံ့ပေးကတည်းက, အဆိုပါ Aceris ဥပဒေကုမ္ပဏီတခုစိတျထဲတှငျသာဒီနှင့်မြေ-up, ကနေဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး. Aceris နေစဉ်’ ရှေ့နေများအတွက်ရုံးတွေမှအမြဲတမ်းအသုံးပြုခွင့်ရှိသည် 110 […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အာဖဂန်နစ္စတန်အနုညာတစီရင်, အယ်လ်ဘေးနီးယားအနုညာတစီရင်, အယ်လ်ဂျီးရီးယားအနုညာတစီရင်, အင်ဒိုရာအနုညာတစီရင်, အင်ဂိုလာအနုညာတစီရင်, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ပလပ်ခြင်း, အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ညီလာခံ, အနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ခုံသမဓိ, အာဂျင်တီးနားအနုညာတစီရင်, အာမေးနီးယားအနုညာတစီရင်, သြစတြေးလျအနုညာတစီရင်, သြစတြီးယားအနုညာတစီရင်, အဇာဘိုင်ဂျန်အနုညာတစီရင်, ဘဟားမားအနုညာတစီရင်, ဘာရိန်းအနုညာတစီရင်, ဘင်္ဂလားဒေ့အနုညာတစီရင်, Barotseland, ဘယ်လာရုစ်အနုညာတစီရင်, ဘယ်လ်ဂျီယံအနုညာတစီရင်, ဘေလီဇ်အနုညာတစီရင်, ဘီနင်အနုညာတစီရင်, ဘာမြူဒါအနုညာတစီရင်, ဘူတန်အနုညာတစီရင်, Bifurcation, နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်, ဘိုလီးဗီးယားအနုညာတစီရင်, ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားအနုညာတစီရင်, ဘော့ဆွာနာအနုညာတစီရင်, ဘရာဇီးအနုညာတစီရင်, ဘရူနိုင်းအနုညာတစီရင်, ဘူလ်ဂေးရီးယားအနုညာတစီရင်, Burkina Faso အနုညာတစီရင်, ဘူရွန်ဒီအနုညာတစီရင်, ကမ္ဘောဒီးယားအနုညာတစီရင်, ကင်မရွန်းအနုညာတစီရင်, ကနေဒါအနုညာတစီရင်, ကိပ်ဗာဒီအနုညာတစီရင်, ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ချဒ်အနုညာတစီရင်, ချီလီအနုညာတစီရင်, တရုတ်အနုညာတစီရင်, ကိုလံဘီယာအနုညာတစီရင်, ကော်မ္မရိုဇ့်အနုညာတစီရင်, ဆောက်လုပ်ရေးအနုညာတစီရင်, ကော့စတာရီအနုညာတစီရင်, အိုင်ဗရီကို့စ် (အဆိုပါအိုင်ဗရီကို့စ်) ခုံဖှဲ့။ စီရငျဆုံးဖွတျခွငျး, အနုညာတစီရင်၏တရားရုံး, ခရိုအေးရှားအနုညာတစီရင်, ကျူးဘားအနုညာတစီရင်, ဆိုက်ပရပ်စ်အနုညာတစီရင်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ဒိန်းမတ်အနုညာတစီရင်, ဂျီဘူတီနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, အနုညာတစီရင်များတွင်စာရွက်စာတမ်းထုတ်လုပ်မှု, ဒိုမီနီအနုညာတစီရင်, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, အီကွေဒေါအနုညာတစီရင်, အဲဂုတ္တုပြည်၌အနုညာတစီရင်, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအနုညာတစီရင်, အရေးပေါ်ခုံသမာဓိ, စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပဋိညာဉ်စာတမ်းစာချုပ်, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ဘက်တော်သား, အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, အီရီထရီးယားအနုညာတစီရင်, အက်စ်တိုးနီးယားအနုညာတစီရင်, အီသီယိုးပီးအနုညာတစီရင်, Expropriation, ဘက်မလိုက်ဘဲမျှတသော, FIDIC အနုညာတစီရင်, ဖင်လန်အနုညာတစီရင်, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, ဂါဘွန်အနုညာတစီရင်, ဂမ်ဘီယာအနုညာတစီရင်, ဂျော်ဂျီယာအနုညာတစီရင်, ဂျာမဏီအနုညာတစီရင်, ဂါနာအနုညာတစီရင်, ဂရိနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ဂွာတီမာလာအနုညာတစီရင်, ဂီနီအနုညာတစီရင်, ဂိုင်ယာနာအနုညာတစီရင်, ဟေတီအနုညာတစီရင်, HKIAC အနုညာတစီရင်, ဟွန်ဒူးရပ်စ်အနုညာတစီရင်, ဟောင်ကောင်အနုညာတစီရင်, ဟန်ဂေရီအနုညာတစီရင်, ICC ကအနုညာတစီရင်, ICDR အနုညာတစီရင်, အိုက်စလန်အနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, အိန္ဒိယအနုညာတစီရင်, အင်ဒိုနီးရှားအနုညာတစီရင်, Intellectual Property အနုညာတစီရင်, ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်များ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေခိုင်မြဲသော, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သုတေသန, တရားမျှတရေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး, နိုင်ငံတကာအကျိုးဆောင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး, အီရန်အနုညာတစီရင်, အီရတ်အနုညာတစီရင်, အိုင်ယာလန်အနုညာတစီရင်, အစ္စလာမ့်ဥပဒေသိပ္ပံပညာ, ဣသရေလအမျိုးကိုအနုညာတစီရင်, အီတလီနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ဂျမေကာအနုညာတစီရင်, ဂျပန်အနုညာတစီရင်, ယော်ဒန်မြစ်အနုညာတစီရင်, ခွင့်အာဏာ, ကာဇက်စတန်အနုညာတစီရင်, ကင်ညာအနုညာတစီရင်, ကိုဆိုဗိုအနုညာတစီရင်, ကူဝိတ်အနုညာတစီရင်, ကာဂျစ္စတန်အနုညာတစီရင်, လာအိုအနုညာတစီရင်, လတ်ဗီးယားအနုညာတစီရင်, သမုဒ္ဒရာ၏ပညတ္တိကျမ်း, LCIA အနုညာတစီရင်, လေဗနုန်တောအနုညာတစီရင်, လီဆိုသိုအနုညာတစီရင်, လိုင်ဘေးရီးယားအနုညာတစီရင်, လစ်ဗျားအနုညာတစီရင်, လီချင်စတိန်းအနုညာတစီရင်, လစ်သူအနုညာတစီရင်, လန်ဒန်အနုညာတစီရင်, လူဇင်ဘတ်အနုညာတစီရင်, မက်ဆီဒိုးနီးယားအနုညာတစီရင်, ဒါဂတ်စကာအနုညာတစီရင်, မာလာဝီအနုညာတစီရင်, မလေးရှားအနုညာတစီရင်, မော်လ်ဒိုက်အနုညာတစီရင်, မာလီအနုညာတစီရင်, မော်လ်တာအနုညာတစီရင်, Mauritania အနုညာတစီရင်, မောရစ်ရှအနုညာတစီရင်, မက္ကစီကိုအနုညာတစီရင်, မော်လ်ဒိုဗာအနုညာတစီရင်, မိုနာကိုအနုညာတစီရင်, မွန်ဂိုလီးယားအနုညာတစီရင်, မွန်တီနီဂရိုးအနုညာတစီရင်, မော်ရိုကိုအနုညာတစီရင်, မိုဇမ်ဘစ်အနုညာတစီရင်, မြန်မာအနုညာတစီရင်, နမီးဘီးယားအနုညာတစီရင်, နီပေါအနုညာတစီရင်, နယ်သာလန်အနုညာတစီရင်, နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း, နယူးဇီလန်အနုညာတစီရင်, နီကာရာဂွာအနုညာတစီရင်, နိုင်ဂျီးရီးယားအနုညာတစီရင်, မြောက်ကိုရီးယားအနုညာတစီရင်, နော်ဝေအနုညာတစီရင်, အိုမန်အနုညာတစီရင်, ပါကစ္စတန်အနုညာတစီရင်, ပနားမားအနုညာတစီရင်, ပါရာဂွေးအနုညာတစီရင်, ပဲရစ်အနုညာတစီရင်, PCA အနုညာတစီရင်, ပီရူးအနုညာတစီရင်, ဖိလစ်ပိုင်အနုညာတစီရင်, ပိုလန်အနုညာတစီရင်, ပေါ်တူဂီအနုညာတစီရင်, ပြည်သူ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ, ကာတာနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ရိုမေးနီးယားအနုညာတစီရင်, ရုရှားကအနုညာတစီရင်, ရဝမ်ဒါအနုညာတစီရင်, ဆော်ဒီအာရေဗျအနုညာတစီရင်, SCC အနုညာတစီရင်, ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လုံခြုံရေး, ဆီနီဂေါအနုညာတစီရင်, ဆားဘီးယားအနုညာတစီရင်, SIAC အနုညာတစီရင်, ဆီယာရာလီယွန်အနုညာတစီရင်, စင်္ကာပူအနုညာတစီရင်, ဆလိုဗက်ကီးအနုညာတစီရင်, ဆလိုဗေးနီးအနုညာတစီရင်, ဆိုမာလီယာအနုညာတစီရင်, တောင်အာဖရိကအနုညာတစီရင်, တောင်ကိုရီးယားအနုညာတစီရင်, စပိန်အနုညာတစီရင်, အားကစားဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်, သီရိလင်္ကာအနုညာတစီရင်, ပြည်နယ်တာဝန်ယူမှု, ဆူဒန်အနုညာတစီရင်, ဆွာဇီလန်အနုညာတစီရင်, ဆွီဒင်အနုညာတစီရင်, ဆွစ်ဇာလန်အနုညာတစီရင်, ဆီးရီးယားအနုညာတစီရင်, ထိုင်ဝမ်အနုညာတစီရင်, Tajikistan အနုညာတစီရင်, တန်ဇန်းနီးယားအနုညာတစီရင်, ထိုင်းအနုညာတစီရင်, third-ပါတီရန်ပုံငွေရှာခြင်း, တိုဂိုအနုညာတစီရင်, ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုအနုညာတစီရင်, တူနီးရှားအနုညာတစီရင်, တူရကီအနုညာတစီရင်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်အနုညာတစီရင်, ယူဂန်ဒါအနုညာတစီရင်, ယူကရိန်းအနုညာတစီရင်, UNCITRAL အနုညာတစီရင်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်, ဥရုဂွေးအနုညာတစီရင်, ဥဇဘက်အနုညာတစီရင်, ဗင်နီဇွဲလားအနုညာတစီရင်, ဗီယက်နမ်အနုညာတစီရင်, ဗာဂျင်းကျွန်းအနုညာတစီရင်, ဝီလျံ Kirtley, WIPO အနုညာတစီရင်, ယီမင်အနုညာတစီရင်, ဇမ်ဘီယာအနုညာတစီရင်, ဇင်ဘာဘွေအနုညာတစီရင်
01/04/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
နိုင်ငံခြားရေးအနုညာတဆုပေးပွဲ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စတင်အာဏာတည်ခြင်းအပေါ်နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း 1958 (နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိ၏ထိရောက်မှုအတွက်သော့ချက်တူရိယာဖြစ်ပါတယ်. နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်းအားလုံးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောပါတီများလိုအပ်ပါတယ်, ကျော် 160 ပြည်နယ်များရှိ 2016, တလက်ပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်များအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ပြဋ္ဌာန်းရန်မှ, နှင့်နိုင်ငံတကာ […]
15/10/2015 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အဆိုပါ "2015 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်း: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွင်းတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ", အဖြူရောင်အားဖြင့်&ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်တက္ကသိုလ်ဘုရင်မကြီးမာရိကိုနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိကာယကံရှင်များ၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေး, သူတို့ရဲ့ရိပ်မိထိရောက်မှုသုံးသပ်ပြီးနှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းစမ်းသပ်, ၏အခြေခံပေါ်မှာ 763 မေးခွန်းလွှာတုံ့ပြန်မှုများနှင့် 105 ကောက်ယူအင်တာဗျူးများ. အဓိကအားနည်းချက် […]
အနုညာတစီရင်တဲ့မော်ဒယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခါနီးခေါင်းစီးနေသည် (ထိုအခါကောင်းသောအရာဒါက Is?)
16/06/2015 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အနုညာတစီရင်တဲ့မော်ဒယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခါနီးခေါင်းစီးနေသည် (ထိုအခါကောင်းသောအရာဒါက Is?) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ဖြစ်သကဲ့သို့, ယင်း၏အလေ့အကျင့်ရှိသမျှတို့ကိုတိုက်ကြီးပေါ်ထွက်ပျံ့နှံ့နေသည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်က၎င်း၏ key ကိုဒြပ်စင်များ၏တဦးတည်းဖြစ်လာသည်. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ထဲမှာတစ်ဦးကကြီးထွားလာဆွေးနွေးငြင်းခုံယဉ်ကျေးမှု၏မတူကွဲပြားမှုများအကြားတင်းမာမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြနှင့်လေ့ကျင့် […]
next ကို 's Page »
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိရှေ့နေများကခုံသမာဓိဥပဒေသို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးပါ.
အိန္ဒိယတွင်အနုညာတစီရင်ဥပဒေ - နှစ်ဦးကိုအိန္ဒိယပါတီများအနုညာတစီရင်၏နိုင်ငံခြားရေးထိုင်ခုံရှေးခယျြနိုငျ
ဘရာဇီးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်နည်းပြရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက် (CFIA): အနုညာတစီရင်ဘို့နောက်ပြန်တစ်ဦးကအဆင့်?
ဒီ website တွင်အဆိုပါခုံသမာဓိအရင်းအမြစ်များကိုအားဖြင့်သင်တို့မှနှုတ်ဆောင်နေကြတယ် နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Aceris ဥပဒေ SARL.